पत्रकारले महानगरपतिलाई जहाँ भेटे पनि त्यही प्रश्न दोहोर्‍याउन थाले झिँगासँग वार्ता के भयो ? महानगरपतिले भन्नुहुन्छ, खै झिँगालाई वार्तामा बोलाएको हो खाने कुरामा आउँछ, कोठामा आउँछ, नाकमा बस्न आउँछ, अनुहारमा बस्न आउँछ तर झिँगा वार्तामै आउँदैन । अब के गर्ने त ? अब हामीले झिँगाको भाषा बुझ्ने दोभाषे खोजिरहेका छौं, पाएका छैनौं । दोभाषे पाउनासाथ वार्तामा बोलाउँछौं फेरि । मैले भनें— झिँगाको भाषा म बुझ्छु, झिँगाहरू सुरक्षाको दृष्टिले वार्तामा नआएका हुन् । उनीहरू के भन्छन् भने टोल, गाउँ, सहर, बाटो, नदीनाला सबै सफा राख्नुहोस् । त्यसो गर्‍यो भने झिँगा नियोजन पनि हुन्छ र हामी व्यवस्थित हुनेछौं भन्छन् झिँगाहरू ।महानगरपतिले भन्नुभयो गर्दै छौं भन्न पो सजिलो छ गर्न कति गाह्रो छ। प्रकाशित : आश्विन ११, २०७६ १०:२३